Ngaba ndingamsebenzisa umbulali wokhula kwigadi yam yemifuno ekwindla? - Imifuno Igadi
Ukuxhalaba malunga nokusebenzisa ababulali bokhula kufutshane nexesha lokuvuna kunokubangela umbuzo, 'Ngaba ndingamsebenzisa umbulali wokhula kwigadi yam yemifuno ekwindla?' Ababulali bokhula abaliqela banokukhuseleka ukufaka ekwindla. Soloko ufunda izikhombisi zephakheji kubo nabaphi na ababulali bokhula, izinambuzane zokubulala izitshabalalisi, okanye iimveliso zolawulo lokhula ozithengileyo kwiziko legadi, kwaye uzilandele kwileta.
Ndingamsebenzisa umbulali wokhula kwigadi yam yemifuno ekwindla
Ungasebenzisa umbulali wokhula kwigadi yemifuno ekwindla, kodwa kufuneka ukhethe umbulali wokhula ofanelekileyo. Ngaphambi kokuba uthenge kwaye usebenzise umbulali wokhula, qaphela izizathu zakho zokuwusebenzisa kwigadi yemifuno. Khumbula ukuba nantoni na oyifaka kwizityalo okanye emhlabeni iya kuthi ekugqibeleni iphelele kwimifuno oyivunayo. Uqinisekile ufuna ukongeza imichiza kwigadi yemifuno? Ukutsala ukhula ngesandla kuhlala kuyeyona ndlela ikhuselekileyo yokususa ukhula kwisitiya semifuno.
Uyikhulisa njani iGadi yeMifuno
Imifanekiso yasimahla Yemifuno Yemifuno
Ukuchongwa kwe squash yasebusika
Iindlela Zokulawula Ukhula neeMveliso
Zininzi izinto eziqhelekileyo zokulawula ukhula kunye neemveliso ezifanelekileyo kwizitiya zemifuno ezinokuthi zisetyenziswe ekwindla.
Ngaba ioyile yekhokhonathi ilungele iikati
Isikrini: Umbulali wokhula iPreen isebenza kwizithole zokhula, zibulale njengoko zivela. Ukuba ukuwa kuphawula ixesha lonyaka xa uvuna kunokuba utyale, iPreen inokuba ngumbulali obulalayo wokhula. Ngenxa yokuba izityalo zakho zivuthiwe azizukuchaphazeleka zizithako zokubulala ukhula lukaPreen. Imikhombandlela yelebheli ichaza ukuba inokusetyenziswa unyaka wonke. Ipeyinti yeOrganic iqulethe izithako ezikhuselekileyo onokuzisebenzisa kwigadi yemifuno, kodwa qiniseka ukuba ukhetha le mveliso endaweni yeemveliso zePreen yohlobo oluqhelekileyo ukuqinisekisa ukhuseleko malunga nokutya. Susa lonke ukhula oluvuthiweyo ngaphambi kokusebenzisa iPreen. Ayizukubulala ukhula esele likho, kodwa iya kuthintela amatsha ekuthatheni igadi yemifuno.
IGlyphosate : IGlyphosate sesona sithako sisebenzayo kwizibulali zokhula ezinje ngeRound Up, iKleenup kunye nokhula kude ngokunjalo nezinye iimveliso zorhwebo zababulali bokhula abaqhelekileyo. Le khemikhali ibulala amagqabi kunye neengcambu zokhula oluvuthiweyo. Awuhlali emhlabeni, ke ukuba uwugalela ekwindla, ngentwasahlobo elandelayo xa sele ukulungele ukutyala igadi yemifuno ayizukulimaza izithole zemifuno ezisandula ukutyalwa. Sebenzisa lo mbulali wokhula kuphela xa uvune yonke imifuno yakho ngeli xesha lonyaka, kuba nayiphi na into engamanzi efikelela kumagqabi ezityalo zakho zemifuno inokubabulala nayo, kunye nokhula.
Ezinye iindlela zokuLawulwa kokhula
Kukho ezinye iindlela ezininzi zokulawula ukhula kwiigadi zemifuno eziwayo ezibonelela ngeendlela ezingezizo ezekhemikhali zokucinezela okanye ukubulala ukhula.
Iphephandaba livimba ukukhanya kwelanga, kwaye ukuba ufumba amagqabi acoliweyo kunye nokusikwa kwengca ngaphezulu, iyabola ibe ngumgquba ochumileyo owongeza izondlo kwigadi yemifuno. Sukuba nexhala nge-inki ekwiphephandaba; uninzi lwamaphephandaba lushicilelwa nge-inki yesoya, enesiseko semifuno kwaye ikhuselekile ekwenzeni umgquba. Musa nje ukusebenzisa iphepha elibengezelayo elifana neetoni, iintengiso okanye iimagazini. Kwisitiya sokuwa, kunokuba luncedo ukuvuna yonke imifuno yakho kuqala, emva koko usebenzise indlela yephephandaba ukubulala ukhula kunye nokubathintela ukuba bangezi ngentwasahlobo elandelayo.
Imibuzo engama-20 yokubuza intombi yakho
Ukusebenzisa iphephandaba ukulawula ukhula, sasaza umaleko wephephandaba malunga namashiti amathandathu ubukhulu kuloo ndawo ufuna ukucinezela ukhula. Ubeko kumaqhina engca aphezulu okanye amagqabi awayo. Yongeza omnye umaleko wephepha-ndaba. Yinyanzele ngamanzi. Iphephandaba livimba ukukhanya kwelanga kwaye libulala ukhula ngelixa kuthintela imbewu ukuba ingcambu. Ngentwasahlobo elandelayo, vele usike umngxunya ngetrowel yakho kwiphephandaba uze utyale imifuno yakho. Njengoko iphephandaba, ingca kunye namagqabi ephuka, ziya kongeza umgquba ocebileyo emhlabeni.
Ukubulala iintsholongwane elangeni yenye indlela ekhuselekileyo yokulawula ukhula. Le ndlela isebenza ngcono ukuba uyiqala kwezona ndawo zishushu kakhulu enyakeni, zihlala zisekupheleni kweenyanga zasehlotyeni zikaJulayi nezika-Agasti okanye unyaka wonke emazantsi anzulu. Kuyanceda ukucoca umhlaba ngaphambi kokutyala imifuno yakho okanye imifuno onethemba lokuyidlula ebusika. Coca indawo yegadi ngesandla ngokukhupha ukhula olubonakalayo. Thatha amaphepha eplastiki, uwafake kuloo ndawo, kwaye uwafake kwi-ankile ngokungqumba umhlaba emaphethelweni okanye ematyeni. Iiplastiki ezimnyama okanye ukhula olucinezela ilaphu lomhlaba lusebenza kakuhle kodwa ungasebenzisa iplastiki ecacileyo. Imitha yelanga ipheka umhlaba ngaphantsi, iphakamisa amaqondo obushushu aphezulu kakhulu, icoca umhlaba.
Ukufumana uncedo oluthe kratya malunga neendlela zakho zokulawula ukhula kwigadi yemifuno, thetha nommeli wolwandiso lwengingqi yakho Ngaphambi kokufaka nantoni na egadini, qiniseka ukuba ukhululekile ukusebenzisa iikhemikhali kufutshane nemifuno. 'Ndingamsebenzisa umbulali wokhula kwigadi yam yemifuno ekwindla?' ngumbuzo onokuphendulwa uqinisekiswe ngu-'Ewe, 'kodwa kubalulekile ukuba uqwalasele zonke izibonelelo kunye nezithintelo phambi kokuba usasaze naluphi na uhlobo lombulali wokhula.
Iqela Uqeshiso Ifoto Contests And Careers I-Inshorensi Yempilo Nkulu Njengendoda Mnyama Impahla Umsele
ungaxela njani ukuba i-louis vuitton yakho iyinyani
ndingazinikela phi iithoyi ezikufutshane nam
i-eyeshadow yamehlo aluhlaza kunye neenwele ezimdaka
Itafile ejikelezayo ye-antique eneenyawo zenzipho
ukuphuma kwekhaya labazali bakho nge-18